भर्खरै सुनसरीको बर्जु महोत्सवमा घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना… – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै सुनसरीको बर्जु महोत्सवमा घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना…
admin January 18, 2022 January 18, 2022 समाचार 0
प्रकाश तिम्सिना/सुनसरी : सुनसरीको बर्जू गाउँपालिका-६ स्थित चिमडीमा जारी बर्जू महोत्सवमा दर्शकले आ’गज’नी र तो’डफो’ड गरेका छन् ।
मंगलबार महोत्सवको अन्तिम दिन भोजपुरी नायक खेसारीलाल यादव आउने कार्यक्रम थियो । बिहानैदेखि टिकट का’टेर बसेका दर्शकले अन्तिम समयमा यादव नआउने थाहा पाउनासाथ स्टेजमा आ’गो ल’गाएका हुन् ।
उनीहरूले भारतीय ४ ओटा स्कार्पिओमासमेत आ’गो ल’गा’एका छन् । आ’गला’गीबाट टेबल, कुर्सी, साउन्ड सिस्टम जलेर पूर्ण रूपमा न’ष्ट भएको छ । तो’डफो’डबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको बताइएको छ ।
घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिनका लागि मोरङ र सुनसरीबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए । भिडलाई नियन्त्रणमा लिन अ’श्रु ग्याँ’स प्र’हा’र गरिएको उनले बताए ।
बर्जुतालको खेलमैदानमा पुस २४ गतेदेखि महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो । मंगलबार महोत्सवको अन्तिम दिन थियो । संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पत्र नै काटेर महोत्सव रोक्न भनेको थियो । तर, आयोजकले प्रशासनको निर्देशन अवहेलना गर्दै महोत्सव जारी राखेको थियो ।
कश्मिर आक्रमण :छोराको जन्म दिनमा घरआउने बाचा गरेका सुनिल सधैंका लागि अस्ताए !
चितवनमा ट्याक्टर दु र्घट ना हुदा पाँच जनाको निधन
खसीले धकेल्दा भीरबाट खसेकी ऋतु कसरी बनिन् चट्पटवाली ? खोलिन् रहस्य (भिडियो सहित)
आँखै अगाडी मेरी श्रीमतीलाई बाघले खा”यो, घास का”ट्न जङ्गल छिरेका थियौ……….(हा’र्दि’क श्र’द्धा’ञ्जली
भन्छिन्- घरभित्रबाट जितेर हिँडेको मानिसको बाहिर कहिल्यै हार हुँदैन(हेर्नुस् )